के नेपाली राजनीतिकर्मीहरु, परजीवी नै हुन् त ? - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:५७
नेपालका नेताहरु प्रायःका निजि कमाइ नै छैन । त्यस खालको आयस्रोत गर्नुपर्ने जरुरत अनि लगाव दुबै हुदैन । तैपनि राजशी ठाँटमै रम्न र देखिन रुचाउँछ्न । समृद्धि ल्याइहाले पनि आफु र आफ्ना आसेपासेका लागी (गुट समेत) मात्रै ल्याउँछन् । कमाउनकै लागि आफ्ना आसेपासेहरुलाई अनेक तरहले नाजायको कृत्य गर्नका लागि उकास्छन् । केही भैपरि आउँदा राज्यस्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मनलाग्दी संरक्षण गर्छ्न । प्रायः सबै खाले कर्म एवं गतिविधिहरुबाट कमिशन र हिस्सा खोज्नु यिनीहरुको जीवन शैली बनेको छ । भागबण्डा कै राजनीति गर्नु र सो नपाउँदा जनताको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै सडक तताउनु यिनीहरुको संस्कार नै बसेको छ ।
कुनै जमानामा एक प्रसङ्गका लागि जेल बस्या भरमा वा आन्दोलन उकासेकै नाममा पुस्तौ पुग्ने गरि सोको साँवा ब्याज असुल्न खोज्नु यिनीहरुको नियती बनेको छ । आफ्ना मातहतका निकाय देखि संबैधानिक अंङ्ग समेतमा बिधी, पद्धति एवं सोको मर्म बिपरित आफ्नालाई घुसाइ सेटिङ्ग मिलाउनु यिनका चरित्र बन्दै आएको छ । त्यसो गर्न नमिल्दा यिनले पुनः जनता कै नाममा आन्दोलनको आधिबेरी निम्त्याउछन् ।
किनकी, अहिलेसम्म जानेको भनेकै आन्दोलन र भिड जम्मा गर्न त हो नि ! बिकास र समृद्धि त उहीँ भाषण सुन्न पाइन्छ । कागजमा मिठा शब्दले पोत्छन अनि रङ्ग्याउँछन ! ब्यवहारमा त एकाध ठाउँमा छारो हाल्छ्न र बाकी सबै पिँधमा चुहिनु अगावै चुसेर सकाउँछन् । देखाउनका लागि मात्रै हो गरिव अनि श्रमिकका नाममा भाषण गर्ने र बाँस बस्दै खाना खाए झै गर्ने ! अकुत कमाएका र नाजायज तरिकाले कमाउन बानी परेका ब्यवसायी तथा कर्माचारीहरु सँग भने बिकाउँ खाना डकार्छन ।
र यति लेख्नु मेरो कुण्ठा अनि तुष पोख्नु पक्कै होइन । म पनि चाहान्छु हाम्रा नेताहरु राजनेता होउन र बनुन । देश र नागरिकका पीर मर्कामा अर्थपूर्ण साथ देउन, सही अनि यथा समयमा सम्बोधन गरून् । विश्वकै उत्कृष्ट परिवेश अनि बिबिधता पुर्ण सुन्दर देश नेपालको नाम मात्रै नभै कर्मले नै सारा बिश्वसामु चिनाउन । र त्यसका लागि सही र सक्षम ब्यक्तित्वहरुलाई उपयुक्त स्थानमा अवसर दिई हौशला प्रदान गरून् । सक्षम नै छन भने आफ्नालाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतारुन ।
नागरिकले नेताका बोली भन्दा नि गरेका काम, परिणाम अनि ब्यवाहर नियाली रहेका हुन्छन् । त्यसैपनि यो देशमा भाषण मार्फत खोक्ने, ओकल्ने र एकअर्को बिरुद्ध तुस पाल्दै लडाउने, फुटाउने, भत्काउने र बिगार्ने ज्यादा नै भै सक्यो । अब जोड, सुध्र अनि आआफ्ना गति र मति सुधार ! केही छैन, ती दिनमा खुलेरै प्रशंसा पनि गरौला । नजिक पर्न र तस्वीर खिचाउन मरिहत्ते गरौला । नभेट्दा पनि टेलिभिजन वा रेडियो मार्फत देख्दा वा सुन्दा गौरवान्वित हौला ! के हाम्ले हाम्रै पालामा यस्तो देख्न अनि भोग्न पाउँला त नेता ज्यु ?
कामना गरौ कि यस्तै होस !
सबैको जयहोस ! सदा जयहोस !!
नोटः केही न्यून इमान्दार नेता पनि होलान, उहाँहरुको जयहोस !